गुपचुपमा प्रम ओलीको ‘स्वास्थ्य र उपचार खर्च’ | रुपान्तरण
गुपचुपमा प्रम ओलीको ‘स्वास्थ्य र उपचार खर्च’
२ भाद्र २०७६, सोमबार १४:३६
काठमाडौं । आफूलाई आफैं ‘अस्थायी विरामी’ घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फलो-अपका लागि फेरिपनि सिंगापुर जाँदैछन । उनको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने आबश्यकता सरकारले अझसम्म सोचेको छैन । यो सत्य हो, प्रम ओली पूर्ण स्वस्थ्य छैनन । उनको शरीरमा परिश्रम थेग्नसक्ने शक्ति देखिदैन । आइतबार संसदलाई सम्बोधनगर्दा प्रम ओलीले आफू स्वस्थ्य रहेको बताएपनि उनको अबस्था ठीक नभएको अनुमान लगाउनु कठिन थिएन ।
नौ दिन सिंगापुरमा उपचार गरि फर्किएका ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? जनताको जिज्ञासा यसैमा भएपनि अहिलेसम्म बास्तबिकता सार्वजनिक गरिएको छैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको स्वास्थ्य अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी नगराउँदा सरकारको आलोचना समेत बढेको छ ।
प्रम ओलीले अघिल्लो पटक सिंगापुरमा लाग्ने उपचार खर्च आफै बेहोर्ने भनेकाले त्यसबारे त्यति प्रश्न उठेका छैनन । अन्य कुराभने गुपचुप नै राखिएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको विदेशमा हुने उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने निर्णय अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई घाँडो सावित भएको देखिन्छ । उनको उपचार खर्च स्वयंले बेहोर्ने जानकारी सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले औपचारिकरुपमा दिएका हुन । उपचारका क्रममा सिंगापुर जाने टोलीमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै श्रीमती राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाह, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव, र सुरक्षाकर्मी थिए । टोलीमा रहेका सबैको हवाई भाडा, दैनिक भ्रमण भत्ता, होटल खर्च सरकारले बेहोर्छ । प्रम ओलीको उपचार खर्च कसले बेहोर्छ त ? यो प्रश्न जन–चासोको विषय बनेको छ ।
प्रम ओलीको मिर्गौला १२ वर्ष अघि प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रम ओलीको रगतमा क्रियटिनिन बढेको र यो तत्व मिर्गौलाका लागि खतरनाक रहेको ओली निकट एक चिकित्सकले बताए । उनको मिर्गौलाको कार्य क्षमता घटिरहेको छ । स्वास्थ्य अवस्थाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले औपचारिक केही सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रम ओलीको सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी बसरुद्दिन अन्सारीले गरेको जानकारहरु बताउँछन । उनी नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका प्रबन्ध निर्देशक हुन । उनी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुन ।
गत साउन १८ गते उपचार गर्न ओली सिंगापुर गएका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट साउन २० गते प्रम ओलीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीसँग फोटो खिचेर अन्सारीले सिंगापुरबाटै सार्वजनिक गरेका थिए । सिंगापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार पछि प्रम ओली साउन २७ गते स्वदेश फर्किएका थिए ।
बीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार रहेका अन्सारी चुनावमा पराजित भएका थिए ।